Registry အပိုင်းဟာ ရှုပ်ထွေးပြီး စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိယူရပါမယ်.။ Window Forensics လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိပါမယ်။ ဒါကြောင့် Forensics စစ်ဆေးဖို့ tools တွေလိုအပ်လာပါတယ်။
Law Enforcement အဖွဲ့အစည်း ပိုင်းအနေပဲ ၀ယ်ယူရနိုင်တဲ့ Tools တွေ Hardware တွေရှိသလို Free ဖြစ်တဲ့ Tools တွေ Hardware တွေလဲရှိပါတယ်။Eg kali, auto spy (current version 4.9) စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်။ More tools Search in Google ....
အခု Post မှာအဓိက ပြောချင်တာက Forensics Tools တွေက Window Forensic လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ Result တွေထွက်လာမယ် ... ထွက်လာတဲ့ Result တွေကို ဥာဏ်ရှိသလို ပိုင်းခြားရှာဖွေရပါမယ်..
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ Result တော်တော်များများက window registry ပိုင်းမှာ မှတ်သားထားတာကို Forensics Tools ကနေ စုစည်းပြီး ထုတ်ပေးထားတာပါ။ Window Registry ကိုအဓိက ထားပြီးရေးသားနေတာကြောင့် ကျန်တဲ့ အပိုင်းကို ခန ချန်ထားခဲ့ပါမယ်။ (Key point အနေနဲ့ပြောချင်တာက Forensics Tools မှာ ဘာကို စစ်ဆေးမယ် . ဘယ်အပိုင်းကို စစ်ဆေးမယ်, Result တွေထဲက ဘာကိုရှာရမယ်..Result တွေက ဘယ်ကနေ ရရှိလာတယ်ဆိုတာ သိရှိဖို့က Investigator ရဲ့ Knowledge ပါ)
Live system ကို bit by bit (clone) ယူထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် Network information အသေးစိတ်ပါဝင်ပါတယ်။ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ image .ယူခြင်း Hashing နဲ့ Write Blocker အပိုင်းကို ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ရေးပြီးပါပြီး....
Every Body Good Luck ! HaveaNice Day !
What Is Cyber Forensics Part (23) Window Registry...
လာမည့် 2019 ခုနှစ်တွင် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် Cyber တ...
What is Cyber Forensics Part (22) Evidence Device...
What is Cyber forensics ? Part (21) Memory forensics